Banyere Anyị - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.. e guzobere na 1996. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na elu-edu mmiri mmiri kristal ngosi (LCD) mmiri mmiri kristal ngosi modul (LCM) Development na mmepụta nke elu na ọhụrụ technologyenterprise.
Ọ gafere SGS, TUV, BVQI, DNV na ụlọ ọrụ ndị ọzọ asambodo; site n'onye nke LCD dị elu, LCM na-arụpụta ngwa ọrụ na teknụzụ mmepụta, nweta TN-LCD, STN-LCD, SMT-LCM, COB-LCM, COG-LCM, TFT-LCM, OLED-LCM wdg. , nke kacha nta ntụpọ pitch 0.001mm, nke kacha nta akara obosara bụ 0.003mm.）
Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.. e guzobere na 1996. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na elu-edu mmiri mmiri kristal ngosi (LCD) mmiri mmiri kristal ngosi modul (LCM) Development na mmepụta nke elu na ọhụrụ technologyenterprise. Ọ gafere SGS, TUV, BVQI, DNV na ụlọ ọrụ ndị ọzọ asambodo; site na nke LCD dị elu, LCM na-arụpụta ngwa ọrụ na teknụzụ mmepụta, nweta TN-LCD ， STN-LCD, SMT-LCM, COB-LCM, COG-LCM, TFT-LCM, OLED-LCM wdg. , nke kacha nta ntụpọ pitch 0.001mm, nke kacha nta akara obosara bụ 0.003mm.）
Hengtai (Hong Kong) òkè Co., Ltd. ugbu a nwere ihe karịrị 400 ọkọlọtọ mmiri ngosi kristal ngosi modulu (LCM), na imirikiti nke LCD ngwaahịa bụ ahaziri ngwaahịa si ahịa. N'otu oge ahụ, anyị dị mma na ịhazi TFT-LCD, STN-LCD na LCM ngosipụta dị iche iche na nkọwa dị iche iche dị iche iche maka ndị ahịa。 Ugbu a, ejirila ngwaahịa LCD na ngwa ọrụ, akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa, temometa, mita mgbali elu, kọmputa ọnụ ọgụgụ, smart ike mita, mita mmiri, electric table, audio, ntụ oyi, ime njikwa, itinye n'ọkwa, ndị na-achịkọta mmadụ, igwe ịgba ọsọ, igwe abụba, igwe mmụta, akwụkwọ ọkọwa okwu elektrọnik, MP3, elekere na elekere, ndị na-enye mmanụ mmanụ CNC, nkwukọrịta ego, ọgwụ. akụrụngwa, ngwa ngwa ụlọ, ngwaahịa dijitalụ, njikwa akpaaka ụlọ ọrụ, ihu igwe dị iche iche mmadụ, ngwaọrụ aka, ngwa ngwa ozi na mpaghara ndị ọzọ ndị ahịa na-ejikarị eme ihe, na-egbo mkpa ụlọ ọrụ dị iche iche maka ngwaahịa LCD. Ndị enyi mba ụwa tụkwasịrị ngwaahịa ndị ahụ obi ma too ha maka ogo ha dị elu, ike oriri dị ala, nnyefe ọsọ ọsọ, ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, nkwado teknụzụ na-echebara echiche oge niile ma nwee mmekọrịta kwenyesiri ike ogologo oge.
Konglọ ọrụ Hong Kong Hengtai na-agbaso amụma njikwa nke "Uru bara uru dị elu karịa ihe niile, ọrụ na-enweta ọdịnihu" ma na-agbaso ogo klaasị na teknụzụ mbụ. Site na-aga n'ihu prefect nke enterprise management, na-achọ guzosie ogologo oge ekwenye mmekọahụ unremitting mgbalị, ezi obi na nnukwu nye ahịa na ngwaahịa na ọrụ nke na-eduga ndị ọgbọ. Anyị ga-mgbe niile ịzụlite na mmepụta ọzọ na mma ngwaahịa, ahịa ndị na-a qualitya ntị na àgwà na ika oyiyi.
Site na mmepe ngwangwa nke ụlọ ọrụ ngosi LCD, anyị ga-agbasochi mmepe nke teknụzụ ngosipụta ọkaibe nke ụwa, bụrụ ihe ọhụụ, na-emeziwanye! A na-anabata ndị ahịa ịjụ ma nye ngwaahịa anyị iwu!
Enzube nterprise: Nye ngwaahịa dị elu ma zụọ ndị ọrụ dị elu. Duru na mmepe nke mmiri mmiri kristal ngosi ụlọ ọrụ na-eme a mbụ na klas LCD emeputa!
Enterprise mmụọ: Ibute ndị mmadụ ụzọ, na-achọ eziokwu site na eziokwu, na-akwado ihe ọhụrụ, na na-akachasị.
Nzube ahia: Akwa Ogo, ihe ohuru, iguzosi ike n'ezi ihe, rigorhi. Akwa Ogo: Nye ngwaahịa na ọrụ aka dị mma. Innovation: tinye teknụzụ usoro ọhụụ ma mepụta ọhụụ.
ngwaahịa na teknụzụ: Iguzosi ike n'ezi ihe: nke ụlọ ọrụ bụ ntọala nke mmepe ụlọ ọrụ. Enweghị iguzosi ike n'ezi ihe hà nhata ọ bụghị ihe niile. Siri ike: Chọsie ike ịchọrọ onwe gị ma jiri mmekọrịta ndị ahịa kpachara anya iji nye ndị ahịa ngwaahịa dị mma na ọrụ teknụzụ.